Ciidamada Nisa oo Gacanta ku Dhigay Kaydka Qaraxyada Al Shabaab ee Gobolka Hiiraan - Hablaha Media Network
HMN:- Ciidamada Nabad Suggida qaranka ee Gobolka Hiiraan ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen Keyd badan oo waxyaabaha qarxa laga suubiyo, kuwaasi oo Al Shabaab ay ku keydsadeen deegaanka Ceel gaal ee Gobolka Hiiraan.
Howlgalkan qorsheysan oo ciidamada NISA, ay ka fuliyeen Deegaankaasi ayaa waxa ay ku ogaadeen kadib maerkii dadka deegaanka ay ku soo war galiyeen kaydkaasi.
Sarkaal ka tirsan ciidamada NISA oo lagu magacaabo Xasan Kaafi Maxamed, ayaa Warbaahinta u sheegay xogta ay heleen ciidamada kadib inay ugu suuragashay soo qabashada keydkaasi qaraxyada ah.
Sarkaalka ayaa ku tilmaamay goobta ay qaraxyada ka soo qabteen inay aheyd Bakhaarka Qaraxyada Al Shabaab, deeganada kale ee Gobolada dalkana ay u sii gudbin jireen.
Ururka Al-Shabaab ayaa qaraxyada waxa ay ku soo diyaariyaan Gobolada dalka Soomaaliya, kadibna waxa ay ku weeraraan goobaha ciidamada ay ka joogaan deegaanada Gobolka Hiiraan.